Fivahinianana masina :: Notsenaina tamim-pahamendrehana sy tamim-pilaminana ny Papa Fransoa • AoRaha
Raharaham-pirenena • Sosialy
Fivahinianana masina Notsenaina tamim-pahamendrehana sy tamim-pilaminana ny Papa Fransoa
ongasoa eto Madagasikara ny Papa Ray masina Fransoa, omaly tamin’ny 4 ora hariva. Niarahaba azy voalohany teny amin’ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady. Ankizilahy iray avy any Morondava sy ankizivavy iray avy eny Alasora no nanolotra fehezam-boninkazo ho an’ny Papa Fransoa avy eo. Nitafa tamin’ny Filoham-pirenena tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny teny amin’ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny Ray masina, rehefa vita ny fombafomba ofisialy nandraisana azy.
Taorian’izany dia niakatra tao anatin’ilay fiara “karenjy” (Papa mobile) natokana hitondrana azy ny Papa Fransoa. Horakoraka, fanofahofana saina kely sy satroka ary kopakopa-tanana tao anatin’ny fifaliana no nandraisan’ny Malagasy ny Papa Ray masina nanomboka teny amin’ny seranam-piaramadinina teny Ivato nandalo teny amin’ny lalan’i Tsarasaotra nihazo an’Alarobia sy ny fihodinan-dalana teny Ivandry ary nipaka hatreny amin’ny trano fonenan’ny solontenan’ny Papa Fransoa miasa eto Madagasikara.
Vao nitsidika ny tolakandro dia efa maro ireo mpino kristianina no nirohotra nanatona an’ireo toerana maro nandalovan’ny Papa Fransoa. Tomefy olona ny sisin-dalana rehetra. Nisy ireo nivoaka ny toerana nisy azy ka nameno ny sisin’arabe rehefa nandre ny anjomaran’ireo fiara nitomandavana nitondra ny Papa Ray masina. Tsy nahasakana an’ireo olona te ahita azy ny fahavitsian’ny taksibe nihazo an’Ankorondrano sy iny Ivandry hatrany Alarobia iny.
Nandeha an-tongotra aza ny ankamaroan’izy ireo.Tamin’ny 5 ora hariva tsy diso no nigadona tetsy amin’ny fihodinan-dalana mihazo an’Ivandry tetsy Tsarasaotra ny Papa Fransoa. Nirenty nanamorona ny arabe ny saina kely miloko mavo sy fotsy arahina fanentanana an-kira. “ Zava-dehibe aminay ny fahatongavan’ny Papa. Teo Ankorondrano no niodina ny fiara nandehananay ka nandeha an-tongotra avy hatrany izahay nankaty Ivandry”, hoy Raharisoa Hanitra , renim-pianakaviana iray niaraka tamin’ny zanany.
Maro tamin’ireo olona no efa antomotra ny fandalovan’ny Papa vao tonga teny an-toerana noho ny fandehanana an-tongotra. Nisy kosa tamin’ireo olona hody amin’iny lalana iny no tsy afa-manoatra fa tsy maintsy nijanona satria tapaka ny fifamoivoizana ka nanampy isa an’ireo liana te hijery azy. « Tokony hitondra fanovana, na ara-pinoana, na ara-tsaina ny fahatongavan’ny Papa Fransoa eto amintsika. Na dian-tongotra aza no handehananay hody dia tsy maninona fa ny fahitana azy no zava-dehibe », hoy indray Ramanampisoa Théodore, raim-pianakaviana monina any Ankadimanga Ambohidrapeto.
Tsy nisy kianina ny fanarahana ny arofenitra sy ny fanarahana an’ireo toromarika rehetra manodidina ny fitandroana ny filaminana tamin’ny fitsenana ny Papa Ray masina, omaly. Nanomboka teny Ivato hatreny amin’ny fonenan’ny solontenan’ny Papa eto amintsika teny Ivandry dia hentitra sy matihanina tokoa io lafiny fitandroana ny filaminana io. Rakotra mpitandro ny filaminana ny lalana nolalovana rehetra.
Ankoatra izany, maro ireo fiaran’ny mpitandro ny filaminana no nivezivezy tamin’ireo lalana ireo. Voafehy tanteraka ireo olona nanamorona ny arabe. Tsy nisy rahateo ny fandraisan-tanana nataon’ny Papa Ray masina tamin’ireo olona nitsena azy teny amin’ireo lalana nolalovany.
Toy izany koa dia tsy nisy kianina ny fampitana mivantana an’ireo sary tamin’ireo fahitalavitra teto an-drenivohitra sy nandritra iny fahatongavan’ny Papa Ray masina, omaly, iny. Nahazo toraka voninkazo ihany koa ireo mpikarakara tamin’ireo nanaraka mivantana an’izany tamin’ny fahitalavi-pirenena ny fitantarana sy ny fanomezam-baovao mikasika an’izao fahatongavany eto amintsika izao.
Fifidianana kaominaly :: Haparitaka any amin’ny faritra ireo komity manokana mpikirakira vokatra
Toby fiantsonan’ny taksiborosy :: Hifindra eny Andohantapenaka ireo kaoperativa etsy Ambodivona